EU Lawmakers Clear U.S. Beef Imports but Fault U.S. Tariffs | Myanmar Business Today
HomeBusinessRegionalEU Lawmakers Clear U.S. Beef Imports but Fault U.S. Tariffs
Exporters from Australia and Uruguay, and more recently Argentina, decided to sell into the quota, pushing the U.S. share from nearly 100 percent to 30percent.
အမေရိကန်ထံမှ အမဲသား တင်သွင်းမှုကို တိုးမြှင့်ရန် ဥရောပသမဂ္ဂဥပဒေပြု အမတ်များက အတည်ပြုလိုက်သည်။ ထိုကဲ့သို့ အတည်ပြုလိုက်ခြင်းကြောင့် အမေရိကန်နှင့် အီးယူအကြား ဖြစ်ပွားနေသော တင်းမာမှုများကို လျော့ကျလာစေနိုင်သည့် အနေအထားရှိနေသည်။
သို့သော် ဥရောပဘက်မှ တင်ပို့သော သတ္တုများအပေါ် အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump က သွင်းကုန်အခွန်များ ချမှတ်ခဲ့ခြင်း၊ အီးယူ‌ထုတ် မော်တော်ယာဥ်နှင့် မော်တော်ယာဥ်အစိတ်အပိုင်းများအပေါ် အခွန်ချမှတ်မည်ဟူသော ခြိမ်း‌ခြောက်မှုများကိုတော့ ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် အမေရိကန် မွေးမြူရေးသမားများကို ပေးထားသည့် တန်ချိန် ၄၅၀၀၀ ခွဲတမ်းထက် ပိုမို တိုးမြှင့်ကာ တင်သွင်းမည့် အစီအစဥ်ကို ၄၅၇ မဲ – ၁၄၀ မဲဖြင့် အတည်ပြုခဲ့သည်။
ဥရောပ၏ စတီးနှင့် အလူမီနီယံတင်သွင်းမှုများအပေါ် အမေရိကန်က ချမှတ်ထားသည့် အခွန်များဖယ်ရှားပေးရန်နှင့် အီးယူလုပ်ကားများအပေါ် သွင်းကုန်အခွန်များတိုးမြှင့်မည်ဟူသော ခြိမ်းခြောက်မှုကို ရုတ်သိမ်းရန် တိုက်တွန်းမှုနှင့် အတူ ထိုကဲ့သို့ မဲပေး အတည်ပြုခဲ့ကြခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ အမဲသားတင်သွင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ ၁၉၈၁ ခုနှစ်က အသားတိုးစေရန် ဟိုမိုးဆေးအသုံးပြုခြင်းအပေါ် ပိတ်ပင်လိုက်မှုအပြီးတွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော အငြင်းပွားမှုကို ဖြေရှင်းရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အဆိုပါ အငြင်းပွားမှုအား ဟိုမုန်းဆေးမသုံးသော အမဲသား ခွဲတမ်းပေးကာ တင်သွင်းစေရန် သဘောတူညီမှုဖြင့် အမေရိကန်နှင့် အီးယူတို့အကြား အငြင်းပွားမှုကို ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။
သို့သော် ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်၏ စည်းမျဥ်းများအရ အဆိုပါ ခွဲတမ်းမှာ အမေရိကန်မဟုတ်သည့် နိုင်ငံများလည်း ရပိုင်ခွင့်ရှိသောကြောင့် သြ‌စတြေးလျ၊ ဥရုဂွေးနှင့် အာဂျင်တီးနားတို့ကလည်း အဆိုပါ ခွဲတမ်းရရှိရန် ကြိုးပမ်းလာ‌ကြသောကြောင့် အမေရိကန်၏ ဈေးကွက် ဝေစုမှာ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့ လျှော့ချပေးခဲ့သည်။
SourcePhilip Blenkinsop (Reuters)
Previous articleNew Shipping Rules, China Pummel Asian Refinery Profits: Russell
Next articleS.Korea Plans To Shut Down Up To 15 Coal-Fired Power Plants For Winter